Dhacdo naxdin leh; Labo wiil walaalo ah una dhashay Hindiya oo kufsaday walaashood 12 jir ah kahor inteysan qoorta ka jirin. – Filimside.net
Dhacdo naxdin leh; Labo wiil walaalo ah una dhashay Hindiya oo kufsaday walaashood 12 jir ah kahor inteysan qoorta ka jirin.
March 21, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Booliska Hindiya ayaa gacanta kusoo dhigay labo wiil oo walaalo ah kuwaasoo lagu soo eedeeyay in ey kufsadeen walaashood oo 12 jir ah kadibna madaxa ka gooyeen.
Sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigay adeerka gabadhaan oo 40 jir ah iyagoo wali booliska raadinayaan walaalka weyn ee gabadhaan inta la kufsaday la dilay.
Meydka gabadhaan 12 jirta ah ayaa laga helay gobolka Madhya Pradesh waxaana lagu soo waramayaa in dhamaan qareenada difaaca ay diideen iney u doodaan xuquuqda dambiilayaasha taasoo cadeyneyso sida bulshada uga careysantahay falkaan naxariis darada ah.
Sargaal booliis ah oo u waramayay saxaafada ayaa sheegay in falkaan ay ku lug leeyihiin sadax wiil oo walaalo ah iyo adeerkooda iyagoo gabadha markii hore kufsadeen kadibna markey ugu hanjabtay in booliska ku dacweyn doonto ay gabadhii yareyd dileen isla markaasna meydkeeda dibada kusoo tureen.
Sarkgaalkaan ayaa hadalkiisa raaciyay; ma arkin fal sidaan u naxariis daran xitaa qareenada difaaca way diideen in dambiilayaasha kiiskooda la wareegaan
Dowlada India ayaa ah dowlada ugu badan ee kufsiyada noocaan ka dhacaan waxaana kaliya sanadkii 2016dii la diiwaan galiyay xaalad kufsi oo kor u dhaafeyso 36,000 iyadoo hey’ada qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta u dooday ay sheegeen sanadkii 2014tii in sadaxdii ruux ee lagu kufsado India uu hal kamid ah yahay caruur taasoo ah tiro aad u badan.
Waxaa Aqrisay 594